बजार प्रवेश गर्न चाहानेहरुका लागि सुनौलो समय आएको छ, सेयर किन्ने नै रातो बजारमा हो - Arthasansar
बुधबार, २३ असार २०७८, २० : ४५ मा प्रकाशित
अहिले बजार घटेको अवस्था सेयर खरिदका लागि भने सुनौलो मौका रहेको सेयर विश्लेषक तथा प्रशिक्षक सन्दिप कुमार चौधरीले बताएका छन् ।
अर्थसंसारको साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थसंसार डटकमको कुराकानीमा उनले बढेको बेलामा भन्दा पनि सधैँभरी बजार घटेको बेलामा सेयर किन्नुपर्ने बताएका हुन् । ​एउटा पक्ष मात्र हेरेर कहिल्यै लगानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । विभिन्न पक्षबाट जाँच गरेर मात्र सेयर किन्दा उक्त लगानी बढी सुरक्षित हुने तर्क उनको छ ।
राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर होल्ड गर्न सकेमा राम्रो मुनाफा कमाउन सकिने भन्दै उनले बजार घट्यो भन्दैमा प्यानिक सेल गर्ने लगानीकर्ताहरू घाटामा जाने बताउँछन् । बजार उच्च विन्दुमा हुँदा पनि सेयर किन्न नहुने उनको सुझाव छ ।
उनले सेयर बजारमा हकप्रद सेयर र बोनस सेयर वितरण गरिनु ट्रेडरहरुका लागि राम्रो भएपनि दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरूका लागि त्यति फलदायि नहुने बताउछन् उनि । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर वितरण गर्ने कम्पनी राम्रा हैनन् । उनी भन्छन्," हकप्रद र बोनस वितरण गर्नु भनेको सेयरधनी थप्नु हो । कम्पनीले सेयरधनी थप्दा आउटस्ट्यान्डिङ (Outstanding) सेयर पनि बढ्छ । यसो हुँदा इपीएस बढ्न सक्दैन ।" सबैभन्दा मुख्य कुरा लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान रहेको बताउँछन् उनी ।
कुराकानी कै क्रममा उनले छोटो समयका लागि सेयरमा लगानी गर्ने हो भने प्राविधिक पक्ष हेर्नुपर्ने, ठिक्क मध्यम समयको लागि सेयरमा लगानी गर्ने हो भने प्राविधिक र आधारभूत दुवै पक्ष हेर्नुपर्ने र लामो समयका लागि लगानी गर्ने हो भने आधारभूत पक्ष मात्र हेर्दा हुने बताएका छन् । उनी भन्छन्, "छोटो अवधिको लागी लगानी गर्ने व्यापारी हुन् भने मध्यम र लामो समयका लागी लगानी गर्ने लगानकर्ता हुन्।" त्यसैले, लगानीकर्ताले लगानी गर्नु अगाडि आफ्नो रणनीति राम्ररी पहिचान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बजारमा भर्खरै प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरुलाई प्राविधिक विश्लेषण गर्न कति सजिलाे छ ? कस्ता लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने ? कम्पनीको प्राविधिक पक्ष कसरी अध्ययन गर्ने ? कतिपयले प्राविधिक विश्लेषकहरूलाई धर्के भन्ने गर्दछन् यो के कति सत्य हो ? प्राविधिक विश्लेषण कति विश्वसनीय ? प्राविधिक अध्ययन गर्नु ज्योतिषले भविष्यवाणी गरेको जस्तो हो ?
बजारमा कहिले प्रवेश गर्ने ? बजार प्रवेश गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ? सेयर बजार घटेको बेला कसरी थाहा पाउने ? कस्तो समयमा सेयर किन्ने ? कस्तो समयमा सेयर बेच्ने ? पहिला रेकर्डहरू ब्रेक गरी पछिल्लो समय दिनहुँ घटिरहेको बजारलाई प्राविधिक रूपले कसरी विश्लेषण गर्ने ?
यी र यस्तै प्रश्नहरुमा उनीसँग गरिएको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ :